Culumada Soomaaliyeed oo muddo kaddib shacabka ku boorrinaysa inay ka dhiidhiyaan dhibka haysta | Hadalsame Media
Home Wararka Culumada Soomaaliyeed oo muddo kaddib shacabka ku boorrinaysa inay ka dhiidhiyaan dhibka...
Culumada Soomaaliyeed oo muddo kaddib shacabka ku boorrinaysa inay ka dhiidhiyaan dhibka haysta
(Hadalsame) 26 Maarso 2022 – Culumo waaweyn oo Soomaaliyeed ayaa bilaabay inay ka dhiidhiyaan dhiigga shacabka Soomaaliyeed oo kooxda Al-Shabaab ay si joogto ah u daadineyso.
Sheekh Suldaan Cabdiqani Qorane oo ka mid ah culumada ku nool deegaanada Puntland ayaa isna maanta khudbadii Jimcaha ku soo qaatay gumaadka ay kooxda Al-Shabaab ku heyso dadka Soomaaliyeed, isagoo dul istaagay dadkii ay ku jirtay Aamina Maxamed ee habeeno ka hor Beledweyne lagu laayey.
Sheekh Suldaan oo dilalka, maamul xumada ka jirta Soomaaliya iyo daciifnimada shacabka khudbadiisii maanta uga hadlay ayaa dadka Soomaaliyeed ugu gacan haatiyey inay is dabo qabtaan oo cadowgooda ku baraarugaan.
Isha: Caasimadda Online
Previous article”Inta meel iskugu geeyeen ayay…!” – Ciidamada Kenya oo markale dad rayid ah ku waxyeelleeyey Somalia
Next articleDuqaynta Xuutiyiinta oo sumcad xumo u keentay Sucuudiga & ujeeddo wayn oo ay ka leeyihiin + Muuqaal